Myo Chit Myanmar: Myanmar Art and Entertainment News
Showing posts with label Myanmar Art and Entertainment News. Show all posts
.....ပိန်လျလျ ခန္ဓာကိုယ် .. ၀င်းဝါဖျော့တော့တဲ့ အသားရောင် .. ။ ကျောလယ်လောက်ဆံနွယ်ဝေ့၀ဲဝဲများ .. ။ ခက်ထန်တင်းမာပြီး နာကျင်နေတဲ့ ဒါဏ်ရာရနေတဲ့မျက်နှာ .. ။ မျက်ရည်ပြည့်လျှမ်းကာ နီမြန်းနေတဲ့ကြားက..မီးလျှံတွေထွက်ကျမလို ပူပြင်းလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းများ .. ။ တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ် ကြည့်မိမြင်မိပြီး ရွှေသွေး သွားတွေကိုတင်းတင်းစေ့ထားမိသည် .. ။ခင်ဗျားက ဘာမို့ လို့ လဲ ..။( ရွှေသွေးမောင်မောင် )..........ရွှေသွေးက စိတ်တိုတိုနှင့် ဇွတ်ပင်ရှေ့ ဆက်တိုးပြီး လှေကားထစ်ကိုတက်လိုက်ပါသည် .. ။သူမ နားကပ်မိလျှင် လှေကားလက်ရန်းကိုကိုင်ထားတဲ့ သူမ လက်တစ်ဖက်ကို ဖျတ်ကနဲတွန်းဖြုတ်ပစ်ကာ ဘေးကကျော်အဖြတ် ပြုတ်သွားတဲ့ထိုလက်က ရွှေသွေးရဲ့ ရှပ်အကျီ င်္စကိုတင်းကျပ်စွာ ဖျတ်ကနဲ ဆုပ်ကိုင်လာလေသည် ..။" ဟာ .. ကျွတ် .. "ရွှေသွေးက သူမ လက်ထဲမှ သူ့ အကျီ င်္စကို အတင်းလက်နှင့်ဖြေထုတ်ကာ သူ့ ဖက်ယိုင်လာသယောင်ရှိတဲ့ သူမ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ ပုခုန်းစွန်းနှင့် ဆောင့်တိုက်မိတဲ့အထိဇွတ်တက်လာခဲ့ပါသည် ..။ သူကအတက် သူမ က ရုတ်တရက်လဲပြိုကာ လှေကားထစ်မှဒလိမ့်ခေါက်ကွေးကျသွားလေသည် ..။ လန့် ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်မိပြီးမှ ကွေ့ ချိုးသံမံတလင်းမှာစောင်းခွေခွေ ခပ်မှီမှီနှင့် သူ့ ထံမျက်လုံးဝိုင်းပြီးမော့ကြည့်နေတဲ့ သူမ မျက်နှာကို ဖျတ်ကနဲ ပြန်လွှဲပစ်လိုက်သည် ..။ကောင်းတယ် .. မှတ်ကရော ..သူမ လိမ့်ကျတာ ငါးထစ်ထည်းရယ်ပါ ..သူ့ ကိုတွန်းချခဲ့တုန်းက ဆယ်ထစ်လေ ..။( ရွှေသွေးမောင်မောင် )..........သူ့ ကိုမုန်းတီးရခြင်းဟာ မ , ရဲ့ တစ်နေ့ တာဆောင်ရွက်ဖွယ်တာဝန်များကြားမှာ ..နာရီတော်တော်များများ၌ မပါမဖြစ် ရောနှောနေရာယူထားပါသည် ..။လူတစ်ယောက်အပေါ် ချစ်ရခြင်းသည်သာမဟုတ် မုန်းရခြင်းသည်လည်းပဲနှောင်ဖွဲ့ ခြင်းတစ်မျိုးနှင့်လူကိုရစ်ပတ်ထားတာပဲ ..။ အာရုံတွေကို ခိုးယူခံထားရခြင်းတစ်မျိုးပဲ ..။မုန်းရတာက ပိုပြီးပင်ပန်းတယ် မ , ထင်သည် ..။ တခါတရံ သူ့ ကိုဘယ်လိုတုန့် ပြန်လိုက်မလဲ ..ဘယ်လိုနာအောင်ပြောလိုက်မလဲတွေ သတိလက်လွတ် စကားလုံးရွေးချယ် စီကာစဉ်ကာနေမိသည် ..။ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိထားမိတဲ့အခါ လှိုင်းထန်နေတဲ့ နာကျင်မုန်းတီးခြင်းထဲ အပန်းတကြီးဟောဟဲဆိုက်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ဖွေရှာတွေ့ မိလျှင် ..မ , က မိမိကိုယ်ကို အံ့ အားသင့်လို့ မဆုံးပေ .. ။( မ ).........." .. သူထိုင်ရှိခိုးလည်း ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုက မ , ခန္ဓာကိုယ်ထဲအကောင်းတိုင်းပြန်လည်တည်ရှိ လာနိုင်မှာမှမဟုတ်တာ .. သူ့ ကို ရှိခိုးခွင့်လည်းမပေးနိုင်ဘူး ..တောင်းပန်ခွင့်လည်းမပေးနိုင်ဘူး .. တစ်နည်းနည်းတောင်းပန်ခွင့်ရလိုက်ရင် သူ့ ရင်ထဲမှာပေါ့သွားမယ် .. သူ့ ဖက်က အမှားတစ်ခုကို တောင်းပန်လိုက်ရပြီးပြီပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်သက်သာရာမျိုး ရသွားမယ် .. အဲဒါကို သူ အရမခံနိုင်ဘူး ..သူစိတ်ပေါ့ပါးသွားမှာကိုလည်း ကြည်ဖြူနိုင်တဲ့ စိတ်ကောင်း မ , မှာမရှိဘူး ..သူ တစ်သက်လုံး မတောင်းပန်ရဘူး .. တောင်းပန်ခွင့် မရတော့ဘူး .. သူသေတဲ့အထိ သူဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို " ......... " တဲ့ အထိ ရက်ရက်စက်စက် အကြင်နာကင်းမဲ့စွာ အငြိုးတကြီး ဆက်ဆံခဲ့မိတယ်ဆိုတဲ့ ယူကြုံးမရစိတ် ခံစားသွားရမယ် ..ဒီစိတ်နဲ့ ပဲ သူသေရမယ် .. နဲနဲကလေးတောင် သူ့ အပြစ်မကျေစေရဘူး .. စိတ်သက်သာရာမရစေရဘူး .. တောင်းပန်ချင်တဲ့ သူ့ ဆန္ဒ ဘယ်တော့မှ မပြည့်ဝစေရဘူး .. .. "( မ ).........." .. နင့်စကားကို ခုလောက်ထိ ရပ်နားထောင်လိုက်ရတာတောင် ငါ့နားနှစ်ဖက် ဘယ်လောက် ငရဲကျနေပြီလဲ နားလည်ရဲ့ လား .. နင့်ကိုမြင်နေရတဲ့ ငါ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုတောင် သတ္တိရှိရင် .. ငါဖောက်ထုတ်လိုက်ချင်သေးတယ် ..အနားမှာနင်ရှိနေတာ ငါပူလောင်လွန်းလို့ ပါ ရွှေသွေးမောင်မောင် .. .. "( မ ).........." .. ရွှေသွေးက စိတ်ပျော့တယ် .. သနားတတ်တယ် .. သူ့ မျက်စေ့ရှေ့ မှောက်မှာမိုင်းနပ်စ်တွေချည်းအမြဲဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူဂရုဏာသက် သနားကြင်နာပြီးပေါက်ဖွားလာတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုဟာ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ချင်းစာမှုမျှသာပါပဲ ဆိုတာ မကြာခင်အချိန်မှာ သူလည်း သိသွားမှာပါ .. အဲဒါ အချစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေ .. "( ရွှေသွေးမောင်မောင် အမေ )..........သူ့ ဘ၀မှာ မမြင်ချင်၍ မုန်းနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေတာက အထီးမကျန်သလိုခံစားရစေသည်ကို မ , တအံ့ တသြသဘောပေါက်စပြုလေသည် .. ။လုံးဝအထီးကျန်ဆန်လှတဲ့ မ , ရဲ့ ဘ၀မှာ ချစ်စရာလူရယ်လို့ သေချာရှိမနေသော်လည်းမုန်းစရာလူတစ်ယောက် ရှိနေသေးတာကိုက ကိုယ်ဟာ တစ်ယောက်ထည်းမဟုတ်ပါလားလို့.. ဘ၀င်ကျနိုင်တဲ့ခံစားချက်ကို ရနေစေခဲ့တာပါလား .. ။သူ့ ကိုတွေ့ လျှင် မ , သွေးတို့ဆူပွက်သည် ..။ မ , မုန်းတီးနာကျည်းသည် ..။ဒေါသတစိမ့်စိမ့်ထွက်သည် ..။ ဤခံစားချက်တို့ က မ , ကိုလူသားဆန်စေသည် .. ။( မ ).........." .. မ , အမုန်းက ကျွန်တော့အတွက် ရေလို လေလို ကျွန်တော်နဲ့ ထိတွေ့ ယဉ်ပါးနေတဲ့ကျွန်တော်အလိုအပ်ဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီ ..။ မုန်းပါ မ , .. မ , ကြိုက်သလောက် မုန်းတော့ .. မ , မုန်းလေ ..ကျွန်တော်က ချစ်လေ .. မ , အချစ်ကိုမရရင်တောင် မ , ဆီက အမုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုတော့ ရယူနေပါရစေ .. မ , ရဲ့ အငွေ့ အသက်မရှိပဲ ကျွန်တော် မရှင်သန်နိုင်တော့လို့ ပါ .. "( ရွှေသွေးမောင်မောင် )..........အချစ်ဆိုတာဟာလည်းသံယောဇဉ်တစ်ခုဖြစ်သလို အမုန်းဆိုတာဟာလည်း သံယောဇဉ်တစ်ခုပါပဲ .. ချစ်လို့ ဖြစ်စေ မုန်းလို့ ဖြစ်စေ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်စေ ..ကိုယ့်ရင်ထဲ ကိုယ့်စိတ်အတွေးထဲ .. ကိုယ့်အာရုံထဲ ..သူအမြဲရှိနေတော့တာဟာ ချည်နှောင်ခံရခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့ .. ။ အဲဒီချည်နှောင်မှုကို အတိုင်းအတာကာလ တစ်ခုအထိ ခံယူရပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်မဖြေလျှော့ချင်မရုန်းဖယ်ချင်ပဲ အဲဒီချည်နှောင်ခံရမှုထဲမှာပျော်ပိုက်သွားနိုင်သေးတာ .. ။အချစ်ဆိုတာနဲ့အမုန်းဆိုတာကလည်း ဖျတ်ကနဲ အလွယ်တကူအက်ကြေနိုင်တဲ့ အလွှာပါးပါးကလေးတစ်ခုထည်းပဲကြားခံရှိတာလို့မ , ခံယူတယ် .. အမုန်းရဲ့ တဆုံးကို အင်အားပြင်းပြင်းတိုးဝင်သွားမိရင် အဲဒီ မချစ်မမုန်းအလွှာပါးကလေးကို အရှိန်နဲ့ တိုးတိုက်မိမှာအမှန်ပဲ ..။ အဲဒီအခါ ဟိုတစ်ဖက်က .. အချစ် ဆိုတဲ့နယ်မြေသစ်ထဲ ကျွံနစ်သွားမိမှာ မ , အကြောက်ဆုံးပဲ ရွှေသွေးမောင်မောင် .. ..။( မ ).........." .. ကျွန်တော်သိပါတယ် မ , .. ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက မ , ဒီလောက်တောင် မကြည့်ချင်တဲ့မျက်နှာဆိုရင်နောက် မ , မမြင်စေရပါဘူး .. ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ် .. ။ မ , အတည်တကျ ငြိမ်သက်အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နေတာပဲ ကျွန်တော် မြင်ချင်တာပါ .. ။မ , ကိုကျွန်တော်ချစ်မိတာ .. မ , နောက်ကိုလိုက်နေမိတာ တွေကလည်း မ , ကိုပျော်ရွှင်လာအောင် ကျွန်တော်ထားပေးချင်လို့ ပါ .. ။ ကျွန်တော့အချစ်နဲ့မ , ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အလှပဆုံးလေး .. ကျွန်တော်ပြန်တည်ဆောက်ပေးချင်ခဲ့တာပါ .. ။ဒါ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မ , တကယ်သေချာနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပဲ ထွက်သွားပေးမှာပါ ..မ , ထွက်မသွားရပါဘူး မ , .. မ , တည်ငြိမ်နေပါ .. လွင့်သွားစရာရှိရင် ကျွန်တော်လွင့်သွားပါ့မယ် မ , ရယ် .. "(ရွှေသွေးမောင်မောင် ).........." .. နောက်ကားမှာ ကျမကို အရူးအမူးချစ်နေတဲ့ ကောင်ကလေးတစ်ယောက် ပါလာလို့ ပါ ..သူက နှလုံးခွဲစိတ်ထားတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတာပါ .. သူဆက်မလိုက်နိုင်အောင် တားဖို့..ကား ခနလေး ရပ်ပေးပါ ..ကား ခနလေး ရပ်ပေးပါ .. " ..( မ )...............( မတ်လ စာမေးပွဲများအပြီးမှာ ထွက်လာမယ့် .. ကျမရဲ့ " မ " ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုထဲကကောက်နှုတ်ချက်လေးတွေ တချို့အမြည်းသဘော တင်ပေးလိုက်တာပါ ..ဒီစာအုပ်ကို အခြားသော စာအုပ်များထက် ပိုပြီးအချိန်ပေးရေးခဲ့ပါတယ် ..ဇာတ်လမ်းထဲက မ နဲ့ရွှေသွေးမောင်မောင်ကို ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ စာဖတ်သူတွေမမုန်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့် တစ်ဖက်စောင်းနင်းမဖြစ်ရအောင်တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားရေးခဲ့ပါတယ် ..)....................
လူစိတ်ပျောက်သွားသော သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး
" လူစိတ်ပျောက်သွားသော သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး "
Click HERE to go to my FaceBook link.
Myanmar Actor Min Oat Soe got drunk and behaved as an animal in public.
" သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး အရက်မူးလွန်၍ လူပုံအလယ်တွင် အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့စွာ ရမ်းကားနေပုံ "
Posted in: Myanmar Art and Entertainment News,Myanmar News,News
" ရုပ်ဆိုးမ " by ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ( ၁ ) အဖွင့်သီချင်း ဖြစ်တဲ့ “ မျက်လှည့် “ က Arabian တီးလုံးလေးနဲ့ အစပြုခဲ့ပြီး “ မက်လောက်စရာ “ သီချင်းရဲ့ Mood + Tempo နဲ့ Britain Pop Style + Cha Cha Rock ကို လှပစွာ တွဲဖက်သုံးစွဲထားပါတယ်။
ယောကျာ်း နဲ့ မိန်းမ နှုတ်ခမ်းခြင်းမနမ်းပြရဘူး ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဆင်ဆာအဖွဲ့ ရဲ့ စည်းကမ်းအရ မိန်းကလေးခြင်းတော့ နမ်းပြလို့ရတယ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ ဟာကွက်ကို မရမက နင်းပြီး အတင်း ကြိုတင်ခွင့်တောင်းပြီး အတိုက်အခံညှိနှိုင်းမှုတွေ လ နဲ့ချီ ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးက အိပ်မက်ခန်းဘဲ ဖြစ်ရမယ် အိပ်မက်လို့လဲ သိသာအောင် ပြရမယ် နောက်ပြီး မိန်းကလေး ခြင်းဘဲ နမ်းရမယ် နှုတ်ခမ်းခြင်း လဲ ထိရုံဘဲထိရမယ် Open Mouth မဟုတ်ရဘူး ( No Tounge ) စတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ နဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးတော့မှ
အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ အရမ်း ကြိုက်ကြမယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ( ၁၁ ) “ ကြောင် “ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မာန နဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို သရော်ထားတဲ့ Hip Hop Style သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ပါ။
Lamin Mo Mo Blog http://laminmomo.blogspot.com/
နဲ့ La Min Mo Mo Fan Page (Face Book) http://www.facebook.com/laminmomo တို့ကို တရားဝင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Read More
Lazy Club L.A Show (2011)
Photo - Myo Chit Myanmar
All photos are copyright protected properties of Myo Chit Myanmar HD Media Production.Re-distributing on any form of media is not permitted without my direct approval. Violators will be prosecuted. Read More
Posted in: Music Show,Myanmar Art and Entertainment News,Myanmar News,News,Photo
" တေးသံရှင် ယုဇန Lazy Club နှင့် ဖျော်ဖြေရန် Los Angeles သို့ရောက်ရှိ "
Yuzana has arrived to L.A
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ - မျိုးချစ်မြန်မာ Lazy Club တေးဂီတ အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၁ အမေရိကန် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေမယ့် တေးသံရှင်လေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယုဇန ဟာ ဒီနေ့ Jun 29th, 2011 မှာ Los Angeles ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ တေးသံရှင်များ ဖြစ်တဲ့ တူးတူး R ဇာနည် Lလွန်းဝါ ကော်နီ ဖြူဖြူကျော်သိန်း တို့လဲ ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်အတွင်း ထပ်မံ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောက်ပြီးပြီးချင်း ခဏနားအပြီးမကြာခင်မှာဘဲ ကျွန်တော့် အိမ်ကို ယုဇန နဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုတို့ လာရောက်လည်ပါတ်ရင်း ဒီဖျော်ဖြေပွဲလေး နဲ့ပါတ်သက်ပြီး နည်းနည်းပါးပါး ရှင်းပြဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ Video Invitation လေး ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ ပွဲစီစဉ်သူ မသီတာ (L.A) ကနေ ကျွန်တော့် ကို မွေးနေ့ ညစာ လိုက်ကျွေးမယ်ဆိုတော့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကျွန်တော့်အိမ် မှာရော Penang Cusine ဆိုင်မှာပါ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ညီမလေး ယုဇန က လမ်းမှာ အိပ်ရေးပျက်ခဲ့တာတွေ ကြောင့် မျက်နှာလေး နည်းနည်းချောင်နေတာရယ် ဘာမှ သေချာ မပြင်ဆင်ထားဘဲ နဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ ကမမ်းကတန်းရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပုံလေးတွေ မှာ အားနည်းချက်ရယ်လို့သာ ရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ညံ့ဖြင်းမှုသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာဘဲ June 30th မှာ ကျရောက်မယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးနေ့အကြိုညလေး ကို ပျော်ရွှင်စရာလေး ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ ညီမလေး ယုဇန နဲ့ မသီတာ ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်း ...
Posted in: Myanmar Art and Entertainment News,Myanmar News,News,Photo
Photos - Myo Chit MyanmarALL RIGHTS RESERVED